Famaritana ety ivelany sy ohatra
Inona no dikan'ny Hydrophobic
Ny dikan'ny hoe rano dia midika ara-bakiteny hoe matahotra ny rano. Ao amin'ny simia, dia ilazana ny fananan-tany ny votoaty hanodanana ny rano . Raha ny tena marina, tsy ny fanesorana ny rano dia ny rano tsy misy fanintelony. Ny voanjo miteraka rano dia mampiseho ny rano amin'ny rano ary azo lazaina hoe hydrophobe .
Ny molekiolan'ny hydrophobika dia matetika ny molekiolan'ny nonpolar izay miara-mamorona ny micelles fa tsy mihetsika amin'ny rano.
Ny molekiolan'ny hydrophobic dia mazavazava ao amin'ny solvent tsy manara-penitra (ohatra, solvents organika).
Misy koa fitaovana mahasalama , izay manana fifandraisana amin'ny rano mihoatra ny 150 degre. Ny fon'ireo fitaovana ireo dia manohitra ny fandoroana. Ny endriky ny trondro anaty rano amin'ny tendron'ny tandroka superhydrophobic dia antsoina hoe lôtô Lotus, mifandraika amin'ny fisehoan'ny rano amin'ny ravina lotus. Ny hevi-panafody dia heverina ho vokatry ny fifandonana eo amin'ny sehatry ny fifindra-monina fa tsy ny fananan-tany simika amin'ny raharaha.
Ohatra momba ny vokatra mitroka hydrophobic
Ny menaka, ny menaka, ny alka, ary ny ankamaroan'ny zavamaniry ara-boajanahary dia mihodinkodina. Raha mifangaro menaka na matavy amin'ny rano ianao, dia hisaraka ilay izy. Raha mampihetsika menaka sy rano ianao, dia hikolikolo ny globules amin'ny solika mba hanolorana toerana ambany amin'ny rano.
Ahoana ny fiasan'ny Hydrophobicity
Ny molekiola anaty rano dia tsy miloko. Rehefa miseho amin'ny rano izy ireo, dia manimba ny fatran-drano eo anelanelan'ny molekiolan'ny rano ny endriny tsy poliora, ka mamorona rafitra toy ny clathrate eo amin'ny elany.
Ny rafitra dia nomena kokoa noho ny molekiolan'ny rano malalaka. Ny fiovan'ny entropy (korontana) dia mahatonga ny molekiolan'ny nonpolar hiara-hivory mba hampihena ny fatrany amin'ny rano ary hampihena ny entropy amin'ny rafitra.
Fiovan'ny toetrandro mahery
Na dia ampiasaina matetika aza ny teny hoe hydrophobic sy lipophilic, ny teny roa dia tsy midika hoe zavatra mitovy.
Ny vatana lipophile dia "matavy be". Ny ankamaroan'ny akora simika dia lipophilika, fa ny ekiomenika dia ny fluoro-karbôna sy ny silicones.
Famaritana ny Radiôta sy ny ohatra
Famaritana ny Spectroscopy
Famaritana ny fototarazo (kristaly)
Ahoana ny fijerena ny fihenan'ny redox
Famaritana ny fanodinana isomerisation
Ny fahadisoana lehibe 10 dia nampiasa ny Pool anglisy
Fikarohana toro-hevitra ho an'ny Google News Archive
Montana State University GPA, SAT sy ACT Data
Fepetra miavaka amin'ny chemistry
Ny zaridaina Galaxy of Paleaku
Salaires of Canadian MPs 2015-16
Fomba hahazoanao lisitra Open Golf amerikana
Ny Jeografia momba ny Rivo-doza Sandy
Andriamanitra dia mandrakizay
Moa ve namono an'i Menelaus i Hector?
Herisetra ao amin'ny filàn'ny haino aman-jery
Inona no tokony hatao? (Fitsipi-pitenenana)
Biography of Malinali
Nahoana no tokony hifidy ny olom-pirenena?
Fandalinana ny teny Mandariny isan'andro: "Inona" amin'ny teny Sinoa
Cosmos: Odyssey Recaptition - Episode 1
Ny APETRA dia mandany ny Download
Ny fahatakarana ny famaritana ny hoe 'jiady'
Ahoana ny fisafidianana ny rondron-drano sy ny rongony
Fitsidihana any Eoropa - Famoronan-tsarimihetsika malaza
Fihetseham-po amin'ny fiarahana amin'ny bibikely
Phonaesthetics (teny feo)
John Ericsson - Mpamorona sy mpanamboatra ny USS Monitor